‘केपीजी र प्रचण्डजीलाई संगठन बनाउँदाको कष्ट र गरिमा नै थाहा छैन’
अन्तर्वार्ता/विचार शनिबार, जेठ १८, २०७६
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सचिवालय सदस्य वामदेव गौतम पार्टीभित्र खरो टिप्पणीका लागि चिनिन्छन् । पार्टीभित्रको समस्या, सुधारका लागि गर्नुपर्ने काम र सरकारका विषयमा नेता गौतमसँग हिमाल ले गरेको कुराकानीः
सरकार र पार्टीबीच अन्तरविरोध बढ्दै गएको हो ?
पार्टी औपचारिक रूपमा एकीकृत भए पनि व्यावहारिक रूपमा भएको छैन । सरकारले गरेका हरेक निर्णयमा केही नेता बाहेक पार्टीको संस्थागत संलग्नता छैन । यसले गर्दा सरकार र पार्टीबीच अन्तरविरोध बढेको छ । यो विशेष गरी सरकारमा गएका पार्टीका नेताहरूले ढंग पुर्‍याएर काम गर्न नजान्दा उत्पन्न भएको असहज परिस्थिति हो ।
अध्यक्षद्वयलाई इंगित गर्नुभएको हो ?
अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालसँगै हाम्रो पनि ढंंग पुगिरहेको छैन भन्छु म त । पार्टीको ‘क्रिम फोर्स’ को रूपमा सचिवालय हुनुपर्छ । सचिवालयका पदाधिकारीहरूले सरकार र पार्टीबीच सुमधुरता विकसित गर्नुपर्थ्याे ।
अध्यक्षद्वयको कार्यशैली कम्युनिष्ट पार्टीका नेताको जस्तो छैन, व्यक्तिवादी जस्तो भयो । कम्युनिष्ट पार्टीमा सामूहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत जिम्मेवारी हुन्छ । पार्टी अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारका योजनाबारे पार्टीभित्र छलफल नै नहुने भन्ने हुँदैन । तर, छलफल नगरी अघि बढ्दा पार्टीभित्रबाट सरकारका गतिविधिमाथि टिप्पणी हुन्छ । सरकारले काम गर्दै जाने र पार्टीभित्रबाटै आलोचना भइरहने स्थिति देखियो, यो दुःखद कुरा हो ।
हिजोको एमालेको संगठन बलियो र माओवादीको कमजोर थियो । एकीकरणपछि पार्टी हिजोको माओवादीको बाटोमा लागेको हो ?
पार्टीको अहिलेको अवस्था न हिजोको एमाले न हिजोको माओवादीको जस्तो छ । भद्रगोल छ । दुईमध्ये एक अध्यक्षले पार्टीको संगठन सम्हाले हुन्थ्यो । यहाँ त दुवैले संगठनको महत्व बुझेनन् ।
केपीजी लामो समय जेलमा बसेर आउनुभएको, उहाँलाई पार्टी संगठन बनाउँदाको कष्ट र यसको गरिमा थाहा छैन । संगठन बनाउने क्रममा स–साना तानाबाना बुन्दै धेरै मिहिनेत गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । प्रचण्ड पनि एकैचोटि फौजको कमाण्डर भएर आउनुभयो । हेटौंडा महाधिवेशनले माओवादीको नेतृत्व सहित पदाधिकारीहरू चयन गरे पनि ६ महीनापछि नै उहाँले सबै कमिटी भंग गर्नुभयो र पार्टीमा सर्वेसर्वा बन्नुभयो ।
तर म लगायत हामी धेरै त पार्टी संगठन बनाएर आएका हौं । कम्युनिष्ट पार्टीको शक्ति संगठनमा हुन्छ । पार्टीका प्रत्येक सदस्यलाई जिम्मेवारी तोकिएको हुन्छ । तर अहिले अध्यक्षहरूकै खराबीका कारण पार्टीमा संगठनको महत्व स्थापित गर्न सकिएन ।
त्यसो भए नेकपा सांगठनिक चरित्रबाट तल झर्दै गएको हो ?
त्यही देखिन्छ । पार्टी यसरी चल्दैन । यो स्थिति अझै रह्यो भने आउँदो निर्वाचनसम्ममा हामी निकै बिग्रिसकेका हुन्छौं । निर्वाचनको परिणाम हाम्रो पक्षमा आउँदैन ।
दुवै अध्यक्षबीच सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सम्झौता भएको कुरा आएको छ । यसबारे पार्टीमा केही छलफल भएको छ ?
प्रचण्डले भारत भ्रमणका बेला संचारमाध्यमसँगको अन्तर्वार्तामा आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्नेबारे सम्झौता भएको बताउनुभएको थियो । तर उहाँहरू यसबारे हामीलाई केही बताउनुहुन्न ।
पार्टीमा कार्यविभाजन नतोकिएको अवस्थामा अब तपाईंहरू के गर्नुहुन्छ ?
अब केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर कार्यविभाजन गर्ला । यस पटक सचिवालयले मलाई किसान महासंघ हेर्न खटाएको छ । यो एउटा जिम्मेवारी त भयो ।
एकीकृत पार्टीको वैचारिक लाइन के हुन्छ ?
एकीकरण पूर्व माओवादी मालेमा (माक्र्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद) र २१औं शताब्दीको जनवाद मान्थ्यो । हामी माक्र्सवाद, लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) को लाइनमा हौं । महाधिवेशन नहुन्जेल यी दुवै विचारधारामाथि बहस हुन्छ ।
तर बहसका लागि सचिवालय वा नेतृत्वले खुला गर्नुपर्छ । मेरो विचारमा हामीले माओवाद छोड्छौं । माक्र्सवाद, लेनिनवाद साझा नीति भए । एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद र जबजलाई छोड्न सकिंदैन । यी दुई विषयलाई परिमार्जन वा संयोजन गरेर एउटै ढाँचामा लैजानुपर्छ, लैजान्छौं ।
अध्यक्षहरूको शैलीले के कस्तो असर पारिरहेको छ ?
अहिले सबैजसो निजी संचारमाध्यमहरू सरकारको विरोधमा देखिएका छन् । केपीजीको बोली रुखो छ । उहाँले यसमा सुधार गर्नैपर्छ । कमजोरी अरू पनि छन्। पहिलो पटक बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा घोषणापत्र अनुरूप ल्याइएन। यसो नहुँदा सरकारको बढी आलोचना भएको हो ।
भ्रष्टाचार रोक्न पनि सरकारको तदारुकता देखिएन नि ?
अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतका निकायलाई बलियो बनाउनुपर्छ । तर, समस्या पार्टीमै छ । पार्टी एकीकरण भएर हरेक टोलटोलमा संगठन भएदेखि विभिन्न तहका सरकारका गतिविधि पार्टीप्रति जवाफदेही हुन्थे । गल्ती कमजोरी भए तहगत रूपमा सच्याइन्थ्यो ।
तर अहिले संगठनको स्वरुपमा पार्टी छैन । निर्वाचितहरूलाई स्वेच्छाचारी हुने वातावरण मिल्यो । सरकारको पृष्ठभूमिमा पार्टीको इकाइ नहुँदा उत्तरदायित्वबाट पन्छिन चाहनेले ठाउँ पाइरहेका छन् ।
त्यसो भए अहिलेको सरकार पार्टीले चलाएको छैन ?
अहिलेको सरकार केपीजीले मात्र चलाउनुभएको छ । यो सरकारका आलोचना छिमल्ने जिम्मा पनि उहाँकै हो ।
तपाईंलाई हिजोआज नेतृत्वबाट पाखा लाग्दैछु जस्तो लाग्छ ?
योजनाबद्ध हिसाबले मलाई कसैले पाखा लगाउन खोजेको जस्तो त लाग्दैन । तर अध्यक्षद्वयको कार्यशैली ठीक नहुँदा त्यस्तो देखिएको हुनसक्छ। एकीकरण गर्दा दुई कमिटी मात्र एकीकृत भए । कमिटीमा बसेकाहरूलाई जिम्मेवारी दिइएको छैन । अहिलेको यो समस्या नेतृत्वको खराब कार्यशैलीको उपज हो । दुवै अध्यक्षले संगठनको गरिमा र गम्भीरतालाई आत्मसात् गरेको देखिएन ।
सुधार गरौं भन्ने म लगायतको प्रस्ताव पनि उहाँहरू बेवास्ता गर्नुहुन्छ । अहिले पनि केन्द्रीय सदस्यहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारी थाहा छैन । एउटा जीवन्त पार्टीका लागि यो भन्दा खराबी अरू के हुनसक्ला र !
- प्रस्तुतिः गोपाल गड्तौला